Shina Modely No: Shinoa Manufacture Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine ho an'ny orinasa sy ny mpamatsy ny fanodinana metaly | Miray Top
Modely No: Fanaraha-maso mandeha ho azy Shinoa Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine ho an'ny fanodinana metaly
Y83 andian-dahatsoratra hydraulic vy mofo poti-mofo milina no tena ampiasaina ho an'ny vy fako, vy fako.
koba varahina sy koba aliminioma ary vola hafa amin'ny famoretana faobe cylindrical avo lenta
mba hanamora ny fanodinana sy ny fandrendrehana, indrindra taorian'ny fanafoanana ny vy fanariana vy.
Toerana niaviany JIANGYIN, CHINA
MODELY Série Y83
Fanerena hidraulika 180-3000 taonina
Type Karazana mitsivalana na mitsangana
Haben'ny briquette fanao
hetsika PLC fanaraha-maso
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty dia manana tombony tsara ho an'ny orinasa fanodinana metaly. Amin’izao fotoana izao, olana sedrain’ny firenena tsirairay ny tsy fahampian’ny loharanon-karena. Na inona na inona firenena an-dalam-pandrosoana na mandroso, ny fomba hanaovana ny fanodinana tsara indrindra dia lohahevitra mafana foana. Noho izany dia manamboatra milina fanontam-pirinty briquetting briquetting karazana hydraulika na karazana horizontaly izahay ho an'ny mpanjifanay mba hiatrehana ny metaly misy azy ireo mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty dia tena ampiasaina amin'ny fanerena ny karazana vy rehetra (fanariana vy, varahina, aliminioma, sns) ho sakana amin'ny alalan'ny lasitra, izay mety amin'ny fitaterana sy ny fitsaboana ny vy. Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty no tsara indrindra ho an'ny orinasa varahina sy vy, tsy ferrous metaly.
●Ny rafitra dia natao tamin'ny fitaovana mialoha leakage mba hanafoanana ny hydraulic dona.
● Fitaovana haingana haingana, mba hiantohana ny filan'ny famokarana ny mpampiasa.
●Ny ampahany elektrika dia mampiasa rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy PLC nafarana.
●Ny vatana lehibe dia manaiky ny rafitra vy amin'ny ankapobeny, ny hery avo, ny fahamarinan-toerana tsara, tsy mila mametraka visy.
●Hydraulic scrap vy chip briquetting milina fanontam-pirinty mampiasa hydraulic fifindran'ny, avo matihanina manontolo valve block, mikoriana fantsona, ka ny tsindry very ny rafitra dia kely, manala ny fatiantoka ny leakage.
●Adopt cartridge valve, electro-hydraulic proportional valve sy menaka circuit design, mba ho tonga lafatra ny rafitra hydraulic, na dia eo aza ny enta-mavesatra maharitra, ny rafitra dia tsy hiseho tsy voafehy.
● Ny milina baler metaly hydraulic dia afaka manampy anao hamonjy asa, hanatsara ny fanarenana metaly, hampitombo ny vidin'ny varotra ary hanatsara ny tombony.
●Ny mpanjifa dia afaka mampifanaraka ny fepetra sy ny haben'ny fonosana araka ny filany manokana.
2. Fanaraha-maso mandeha ho azy
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty dia fitaovana amin'ny Adjustable fampisehoana lahatsoratra, hetsika filaharana ary ny fotoana hetsika rehetra dia fehezin'ny rafitra PLC tanteraka, ary azo ahitsy amin'ny fotoana rehetra ny mpandraharaha, mety, tsotra sy mora takarina.
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty dia fitaovana amin'ny conveyor, dia afaka mahatsapa mandeha ho azy famahanana, hampitombo ny fahaiza-manao isan'andro sy hamonjy ny mpiasa.
Ny cylinder hydraulic lehibe dia manafoana ny fanariana vy ary manala ny loza mety hitranga. Ataovy azo antoka ny fiainan'ny serivisy sy ny fiarovana ny fitaovana. Mifanaraka amin'ny bobongolo sy ny bobongolo, ny fanerena ambony amin'ny alàlan'ny famolavolana matihanina miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny fanodinana ambony no antoka ny tsiron'ny fitaovana tsara indrindra. Ny totohondry ny bobongolo sy ny milina fanontam-pirinty dia fitaovana amin'ny tanjaka avo-mahatohitra vy azo soloina haingana. Ny tendron'ny modely LINDUR punch dia misy peratra fanontam-pirinty mahatohitra ho an'ny famongorana sy fametrahana mora, mba hanitatra ny androm-piasany. Ny ampahany mifandraika dia nohamafisina manokana na novolavolaina raha ilaina.
3. SYSTEM HYDRAULIC
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty dia ahitana motera, hydraulic paompy, paompy fiarovana fitaovana, matihanina fanaraha-maso valve block sy sodina rafitra mifandray amin'ny sakana gazety. Famolavolana mitombina, kalitao tsy miovaova. Fitaovana miaraka amin'ny rafitra fampangatsiahana, mba hisorohana ny fitaovana tsy afaka miasa tsy tapaka noho ny hafanana overheating menaka.
Φ140 x （70–100）
Φ180 x （100–140）
Ny milina fanontam-pirinty vy vita amin'ny vy hydraulika dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Ny milina fanontam-pirinty Hydraulic scrap metaly briquetting dia be mpampiasa amin'ny indostria manaraka:
●Ny milina fanontam-pirinty vita amin'ny vy vita amin'ny hydraulic dia mety amin'ny orinasam-pamokarana vy lehibe,
●Orinasa fandrefesana ny herin'ny rivotra lehibe.
●Mpanamboatra vokatra varahina sy alimo.
●Ny indostrian'ny fandrendrehana metaly sy ny fandrendrehana, dia azo tsindriana ny sasany amin'ireo metaly simba na poti-by mandritra ny famokarana.
●Industria fanodinana milina. Ny famenoana sy ny fametahana ny koba, ny potipoti-javatra, ny vovoka ary ny akora vy hafa dia tena manampy amin'ny tontolon'ny atrikasa, ny fanodinana fako ary ny fampiasana ny loharanon'olombelona.
Hydraulic scrap metal chip briquetting milina fanontam-pirinty fitsipika miasa dia amin'ny alalan'ny fahana varingarina lasitra tanany avy amin'ny hopper mba hanampy machined fitaovana, manao ny ambony maty ambany fanerena amin'ny fitaovana dia voatsindry ny rafitra toe-javatra sy hiverina 1 ~ 2 segondra, fampidinana, nanosika solika varingarina miverina ao. toerana, eo ambanin'ny ambony maty dia ho faty napetraka ny metaly briquetting extrusion lavaka, nanosika cylinder mandroso dia hanomboka ny lavaka, briquetting tsindry cylinder fiverenana tsingerin'ny asa manaraka. Workflow: cylinder fahana mandroso sy cylinder fitaovana fanerena (cylinder master) midina midina, cylinder fitaovana fanerena miverina 1 ~ 2 segondra - cylinder menaka fanosehana (varingarina mifoka sigara) dia antenaina hiverina - cylinder fanerena midina midina tsindrin-tsakafo - cylinder manosika natomboka ny ampahan'ny fanerena amin'ny haavon'ny -- cylinder fahana fitaovana dia niverina, ho any amin'ny tsingerin'ny asa manaraka.
Hampiasa fonosan-tsarimihetsika voafono sy fonosana hazo izahay mba hiarovana ny milina fanontam-pirinty briquetting vy hydraulika.
Jereo ny milina fanontam-pirinty Hydraulic Scrap Metal Chip Briquetting ho an'ny fanodinana metaly miasa!
teo aloha: Modely No: Shinoa Manufacture Q91Y Series Hydraulic scrap vy milina mavesatra hety
Manaraka: Modely No: Fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny famokarana sinoa Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminum Baler Machine ho an'ny Recycling Metal Press
Y81 Hydraulic Baler, Baler baoritra vita an-trano, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Leaf Compactor sy Baler, Scrap Metal Compactor, Aluminum Foil Baler Machine,